အားကစားပြဲ ေလာင္းကစားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ား | SBOBET Information Center
Information Center ဥပေဒသႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ယခုစာရင္းဖြင့္ပါ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ဆက္သြယ္ပါ လိုက္ဖ္ခ်က္
တိုက်ရိုက် ကာစီနို လောင်းကစား စည်းမျဉ်းများ
အားကစားပြဲ ေလာင္းကစားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ား
Reference Number: AA-00212 Last Updated: 2020-09-29 18:550Rating/ Voters
Event details (dates, neutral ground venue, commencement, timers, red cards, statistical information on players and teams or news) displayed on the Website (including details displayed in the Live Center and SBOtv) are for general information only. It is the responsibility of the End User to ensure and verify that such details are correct before placing their bets. The Operator is not responsible for any errors, mistakes, time lag, or omissions to any event details or video streams that are displayed or accessed on the Website.
21.3 အထက်ပါစည်းမျဥ်းစည်းစည်းကမ်း 19.2 အရ အကယ်၍တွဲဖက်အသင်းများ၏ပွဲစဥ်များ ရွှေ့ဆိုင်းသွားခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ရှိလာလျှင် ထိုအသင်းများအပါအဝင် စိတ်ကူးယဥ်ကစားပွဲများအားလုံးပျက်ပြယ်သွားမည်။
23.9 In Running (Live) အလောင်းအစားအ‌ခြေအနေများတွင်
(i) အော်ပရေတာအနေနှင့်ပွဲစဥ်အတွင်းဂိုးရရှိနိုင်ချေမြင့်မားသည့်အချိန်/ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟုထင်မြင်သည့်အချိန်။ သို့မဟုတ်
(b) အထက်ပါစည်းမျဥ်းဥပဒေ B23.9(a) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလောင်းထားသည့်အလောင်းအစားများကို အော်ပရေတာမှလက်ခံမည်/ ငြင်းပယ်မည်ဟုမဆုံးဖြတ်မည်အချိန်အထိအလောင်းအစားများကို "ခေတ္တဆိုင်းငံ့ခြင်း"အဖြင့်ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။
(v) မည်သည့်အချိန်အတွင်းဖြစ်စေကာမှုအသင်းတစ်သင်းကဂိုးရရှိနိုင်သည့်အနေအထားဖြင့်ကစားနေသည့်အချိန်များတွင်၊ သို့မဟုတ်
(d) အမြန်စျေးကွက်တွင်‌လောင်းထားသည့်အလောင်းကစားများအား "ခေတ္တဆိုင်းငံ့ခြင်း"အနေအထားမထားရှိဘဲထိုအလောင်းအစားများကိုလက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ အထက်ပါစည်းမျဥ်းဥပဒေ B23.9 (a) မှ (c) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသက်ရောက်ခြင်းမရှိပါ။
၂၄.၁ ငွေထုတ်ယူခြင်းစနစ်သည် အလောင်းအစားရလဒ်မဆုံးဖြတ်မီ ကစားသူများလောင်းထားသည့်အလောင်းအစားများကို ဖြေရှင်းပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အော်ပရေတာသည်ငွေထုတ်မည့်ပမာဏနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ငွေထုတ်ယူမည့်ပမာနသည် အော်ပရေတာလက်ခံသည့်အချိန်မူပေါ်တည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
၂၄.၂ ငွေထုတ်ယူခြင်းစနစ်သည် တိုက်ရိုက် (Live) နှင့် တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော (Non Live) နှစ်မျိုးစလုံး၏ ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစဉ်နှင့်စျေးကွက်မှာသာရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အော်ပရေတာသည် ငွေထုတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မည့်သည့် အားကစား သို့မဟုတ် ပွဲစဉ် တွင်တာဝန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၂၄.၃ အော်ပရေတာသည် ငွေထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုချက်များကိုလက်ခံရန်ကြန့်ကြာပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အော်ပရေတာမှလက်ခံမှသာလျှင် ငွေထုတ်ရန်တောင်းဆိုမှုအောင်မြင်သည်။ ငွေထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုချက်များကိုလက်ခံခြင်းမပြုမီ ပွဲစဉ်၊ စျေးနှုန်း၊ ကြေးများပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ငွေထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုမှုများ ပယ်ပျက်နိုင်သည်။ ကစားသူများတောင်းဆိုသောငွေထုတ်ယူမှုကိုလက်ခံခြင်းသည် အော်ပရေတာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်လုံး၀မှုတည်သည်။ အော်ပရေတာအနေဖြင့်လည်းငွေထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုမှုကိုငြင်းပယ်နိုင်သကဲ့သို့ ပယ်ဖျက်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၂၄.၄ ငွေထုတ်ယူမှုကိုလက်ခံသောကြောင့် ဆုံးဖြတ်ပေးသည့်အလောင်းအစားများ၏တန်ဖိုးသည် အော်ပရေတာ၏အပိုဆုကြေး သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် (promotion) ငွေကြေးစျေးကွက်မြင့်တင်ရေးတွင်မဆို အလောင်းအစားလည်ပတ်ချက် (turnover requirement) လိုအပ်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၂၄.၅ အော်ပရေတာသည် ငွေထုတ်ယူခြင်းစနစ်ကို မည်သည့်ပွဲစဉ်နှင့်စျေးကွက်တွင်မဆို ရပ်ဆိုင်းရန် နှင့် အားလုံးကိုဖယ်ရှားရန် အခွင့်အာဏာရှိသည်။ အော်ပရေတာက ငွေထုတ်ယူခြင်းစနစ်ကိုဖယ်ရှားရပ်ဆိုင်းလိုက် လျှင်မည်သည့်ပွဲစဉ် သို့မဟုတ် အားကစားစျေးကွက်တွင်လောင်းထားသော အလောင်းအစားများသည် နဂိုမူလလောင်းထားသည့်အတိုင်းတည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ငွေထုတ်ယူခြင်းစနစ်ကိုဖယ်ရှား၊ ရပ်ဆိုင်းလိုက်သောကြောင့် နဂိုမူလလောင်းထားသည့်အလောင်းအစားများပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၂၄.၆ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ငွေထုတ်ယူသည့်စနစ် မရရှိနိုင်သောအခြေနေတွင် အော်ပရေတာအနေနှင့် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ၊ အလောင်းအစားများ နဂိုမူလလောင်းထားသည့်အတိုင်း နှင့် လက်ခံထားသည့်အတိုင်း တည်ရှိရပ်တည်မည်ဖြစ်သည်။
၂၄.၇ ငွေထုတ်ယူသည့်စနစ် အခွင့်အရေးရှိသောနေရာတွင် အော်ပရေတာအနေနှင့် လက်ခံခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန် အထူးဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာရှိသည်။ အကယ်လို့ငွေထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုထားသောနေရာတွင် အော်ပရေတာက ပွဲစဉ်တစ်ခု၏ရလဒ်ကိုသိနိုင်သောအခြေအနေတွင် အော်ပရေတာအနေဖြင့်အောက်ပါအချက်များကိုလုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(က) လက်ခံခြင်းမပြုလုပ်ထားသော ငွေထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုချက်များကိုငြင်းပယ်နိုင်သည်။
(ခ) လက်ခံထားသော ငွေထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုချက်များကို ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဂ) ငွေထုတ်ယူခြင်းမှရသောငွေနှင့်လောင်းထားသော နဂိုမူလအလောင်းအစားများကိုပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၄.၈ မည့်သည့်သီးသန့်ကစားသူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းလိုက်ကစားသူများက ငွေထုတ်ယူခြင်းစနစ်ကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှု သို့မဟုတ် မသမာမှုအသုံးပြုမှု ရှိနေကြောင်း အော်ပရေတာက ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်နှင့်ယုံကြည်မှုရှိလျှင် အော်ပရေတာအနေနှင့်ငွေထုတ်ယူသည့်စနစ်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
8.5 e-Basketball ေလာင္းကစားျခင္း
(a) ဤစည္းမ်ည္းအမွတ္ 8.5 တြင္ မေဖာ္ျပထားပါက စည္းမ်ည္းအမွတ္ 8 သည္ e-Basketball ေလာင္းကစားျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။
(b) e-Basketball ပြဲမ်ားသည္ အသင္းပုံစံႏွင့္ ပြဲကစားျခင္းကိုထင္ဟပ္ေစရန္ ဉာဏ္ရည္တု၊ စက္ျဖင့္သင္ယူျခင္း၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ ဘက္စကတ္ေဘာပြဲအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ simulation မ်ားျဖစ္သည္။
(c) Unless otherwise stated, ပြဲတစ္ပြဲခ်င္းကို တစ္ပိုင္းလွ်င္ ၁၂ မိနစ္ ျဖင့္ ၄ ပိုင္းခြဲကာ ၄၈ မိနစ္ ကစားသည္။
(d) e-Basketball ပြဲစဥ္ရလဒ္မ်ား၊ ရဂိုးမ်ားႏွင့္ အျခားအေလာင္းအစားဆုံးျဖတ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆာ့ဝဲမွထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားဝင္အသင္း သို႔မဟုတ္ လိဂ္ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားအပါအဝင္ အျခားမည္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ မရႏိုင္ပါ။
(e) e-Basketball ပြဲမ်ားသည္ ထုတ္လႊင့္သည့္ပြဲမ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ကို အေလာင္းမ်ားသည့္ေလာင္းကစားပြဲမ်ားဟု သတ္မွတ္သည္။ ထိုပြဲမ်ားတြင္ ေလာင္းကစားသမားတစ္ဦးထက္ပို ေလာင္းကစားႏိုင္ၿပီး ထိုပြဲ၏ရလဒ္သည္ ေလာင္းကစားသူအားလုံး၏ အေလာင္းအစားရလဒ္ပင္ ျဖစ္သည္။
(f) ကြန္ပ်ဴတာ၊ အီလက္ထေရာနစ္၊ ေဆာ့ (ဖ္) ဝဲ၊ ဟာ့ဒ္ဝဲ (သို႔) ဆက္သြယ္ေရးခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ား အပါအ၀င္ မည္သည့္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာခြၽတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္မဆို သတ္မွတ္ပြဲကစားအခ်ိန္အတြင္း ပြဲမၿပီးဆုံးပါက ေအာ္ပေရတာမွ ထိုပြဲကို ပြဲမၿပီးဆုံးဟု ဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ႁခြင္းခ်က္မရွိဆုံးျဖတ္ထားသည့္ အေလာင္းအစားမ်ားကိုသာ အေလ်ာ္အစားလုပ္မည္။ ထြက္ေပၚလာေသာရလဒ္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ အျခားေစ်းကြက္မ်ားအားလုံးမွ အေလာင္းအစားမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေလာင္းေၾကးကို ကစားသူထံသို႔ ျပန္ေပးအပ္မည္။ ေအာ္ပေရတာသည္ ထိုကဲ့သို႔ပြဲစဥ္မ်ားကို ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေလ်ာ္အစားလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာ္ပေရတာ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္သည္။
(g) ေအာ္ပေရတာသည္ e-Basketball အေလာင္းအစားကို ပ်က္ျပယ္အျဖစ္ေၾကျငာပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အကယ္၍
(i) အေလာင္းအစား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ မမွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာရရွိလွ်င္၊
(ii) ေအာ္ပေရတာသည္ အသုံးျပဳသူတစ္ဦး (သို႔) တစ္ခုထက္ပိုသူမ်ားသည္ လိမ္လည္မႈ၊ ပူးေပါင္းမႈ၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားတရားမဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနသည္ဟု သံသယရွိလွ်င္၊
(iii) ပြဲမစတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မၿပီးဆုံးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရလဒ္ကိုမဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ ေပၚေပါက္လွ်င္၊
(iv) အေလာင္းအစားကို လက္ခံရာတြင္ မည္သည့္အေလာင္းအစား ကန႔္သတ္ခ်က္ထက္မဆို ေက်ာ္လြန္သြားလွ်င္၊
(v) ေလာင္းေၾကးပမာဏသည္ အသုံးျပဳသူ၏အေကာင့္တြင္ မရွိလွ်င္၊
(vi) အမွားတစ္ခု (လူ သို႔မဟုတ္ အျခား) သို႔မဟုတ္ စနစ္ခြၽတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္ မွားယြင္းေသာ odds မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့လွ်င္၊
(vii) ဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ ခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ား၊ ၾကားျဖတ္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမ်ား၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား၊ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈတိုက္ခိုက္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ျခင္း (သို႔) အခ်က္အလက္လိမ္လည္မႈ စသည့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအမွားမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္
(viii) နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မွ အလြန္အကြၽံ သို႔မဟုတ္ မမွန္မကန္ အႏိုင္ေပးလွ်င္။
(h) အမွား (လူ သို႔မဟုတ္ အျခား) ေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ စနစ္ခြၽတ္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ အေလာင္းအစားအား မမွန္မကန္ေပးေလ်ာ္ၿပီးပါက ေပးေလ်ာ္မႈကို တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္ကာ ရလဒ္ကို ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ျပဳရန္ရာတြင္ ေလာင္းကစားသူ၏အေကာင့္တြင္ ေငြမလုံေလာက္ပါက ေလာင္းကစားသူသည္ လိုအပ္ေသာပမာဏကို ေအာ္ပေရတာသို႔ ျပန္ေပးရန္လိုအပ္လိမ့္မည္။
(1) Predict if the total foraspecific statistic offered is higher or lowerthan the final statistic. For the purposes of Over/Under bets in thisRule, an Over (or higher) bet shall includeaprediction where the finalstatistic is equal to the statistic offered and in the event that thefinal statistic is equal to the statistic offered, an Under (or lower)prediction will bealosing bet.
(a) Any Kill props (as commonly described) for DOTA2 and League of Legends matches will be graded using the in-game scoreboard, displayed at the top of the screen.
20.8 e-Football လောင်းကစားခြင်း
(a) ဤစည်းမျည်းအမှတ် 20.8 တွင် မဖော်ပြထားပါက စည်းမျည်းအမှတ် 20 သည် e-Football လောင်းကစားခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
(b) e-Football ပွဲများသည် အသင်းပုံစံနှင့် ပွဲကစားခြင်းကိုထင်ဟပ်စေရန် ဉာဏ်ရည်တု၊ စက်ဖြင့်သင်ယူခြင်း၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ ဘောလုံးပွဲအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံထားသော simulation များဖြစ်သည်။
(c) ပွဲတစ်ပွဲချင်းကို တစ်ပိုင်းလျှင် ၈ မိနစ် ဖြင့် ၂ ပိုင်းခွဲကာ ၁၆ မိနစ် ကစားသည်။
(d) e-Football ပွဲစဉ်ရလဒ်များ၊ ရဂိုးများနှင့် အခြားအလောင်းအစားဆုံးဖြတ်သည့်အချက်အလက်များသည် ဆော့ဝဲမှထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဝင်အသင်း သို့မဟုတ် လိဂ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပါအဝင် အခြားမည်သည့်အရင်းအမြစ်များမှ မရနိုင်ပါ။
(e) e-Football ပွဲများသည် ထုတ်လွှင့်သည့်ပွဲများဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ကို အလောင်းများသည့်လောင်းကစားပွဲများဟု သတ်မှတ်သည်။ ထိုပွဲများတွင် လောင်းကစားသမားတစ်ဦးထက်ပို လောင်းကစားနိုင်ပြီး ထိုပွဲ၏ရလဒ်သည် လောင်းကစားသူအားလုံး၏ အလောင်းအစားရလဒ်ပင် ဖြစ်သည်။
(g) အော်ပရေတာသည် e-Football အလောင်းအစားကို ပျက်ပြယ်အဖြစ်ကြေငြာပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍
(i) အလောင်းအစား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် မမှန်ကန်သော အချက်အလက်များကိုသာရရှိလျှင်၊
(ii) အော်ပရေတာသည် အသုံးပြုသူတစ်ဦး (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသူများသည် လိမ်လည်မှု၊ ပူးပေါင်းမှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အခြားတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ပါ၀င်နေသည်ဟု သံသယရှိလျှင်၊
(iii) ပွဲမစတင်ခြင်း သို့မဟုတ် မပြီးဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ရလဒ်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းတို့ ပေါ်ပေါက်လျှင်၊
(iv) အလောင်းအစားကို လက်ခံရာတွင် မည်သည့်အလောင်းအစား ကန့်သတ်ချက်ထက်မဆို ကျော်လွန်သွားလျှင်၊
(v) လောင်းကြေးပမာဏသည် အသုံးပြုသူ၏အကောင့်တွင် မရှိလျှင်၊
(vi) အမှားတစ်ခု (လူ သို့မဟုတ် အခြား) သို့မဟုတ် စနစ်ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် မှားယွင်းသော odds များကို အသုံးပြုခဲ့လျှင်၊
(vii) ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းမှုများ၊ ကြားဖြတ်နှောင့်နှေးခြင်းများ၊ နှောင့်နှေးမှုများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုတိုက်ခိုက်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ခြင်း (သို့) အချက်အလက်လိမ်လည်မှု စသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမှားများ ဖြစ်ပေါ်လျှင်၊ သို့မဟုတ်
(viii) နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်မှ အလွန်အကျွံ သို့မဟုတ် မမှန်မကန် အနိုင်ပေးလျှင်။
(h) အမှား (လူ သို့မဟုတ် အခြား) ကြောင့် သို့မဟုတ် စနစ်ချွတ်ယွင်းခြင်းကြောင့် အလောင်းအစားအား မမှန်မကန်ပေးလျော်ပြီးပါက ပေးလျော်မှုကို တရားမဝင်ဟု သတ်မှတ်ကာ ရလဒ်ကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ထိုသို့ပြုရန်ရာတွင် လောင်းကစားသူ၏အကောင့်တွင် ငွေမလုံလောက်ပါက လောင်းကစားသူသည် လိုအပ်သောပမာဏကို အော်ပရေတာသို့ ပြန်ပေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
(b) In Running ("Live) Betting